Imithombo yeendaba yeNtlalo | Martech Zone
Iimveliso zentengiso yemidiya yoluntu, iinkonzo kunye neendaba kunye neengcebiso zemidiya yoluntu kunye neendlela ezilungileyo zokuthengisa Martech Zone
Itekhnoloji yeNtengiso Uhlalutyo novavanyo UkuThengiswa kweMpahla I-CRM kunye namaQonga eDatha Uqoqosho kunye noRhwebo Ukuthengisa nge-imeyile kunye nokuThengisa nge-imeyile Itekhnoloji eKhanyayo Ukuthengisa umsitho Ukuthengisa kunye neeVidiyo zokuThengisa Iincwadi Zentengiso Imicimbi yentengiso Amanani entengiso Izixhobo Zokuthengisa Uqeqesho lweNtengiso Martech Zone apps UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi Partners Eyobudlelwane boluntu Ukunika amandla ukuthengisa Uphando lwezoPhando Social Media Marketing
Repuso: Qokelela, ulawule, kwaye upapashe uPhononongo lwabathengi bakho kunye neeWidgets zoBungqina
NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2022 NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2022 Douglas Karr
Sincedisa amashishini aliqela asekuhlaleni, kubandakanywa umlutha weendawo ezininzi kunye nekhonkco lokubuyisela, ikhonkco lamazinyo, kunye nesibini samashishini eenkonzo zasekhaya. Xa sasikhwele kwaba bathengi, ndothuka ngokunyanisekileyo, ngenani leenkampani zasekhaya ezingenazo iindlela zokucela, ukuqokelela, ukulawula, ukuphendula, kunye nokupapasha ubungqina kunye nophononongo lwabathengi. Ndizakuyichaza le nto ngokungathandabuzekiyo... ukuba abantu bafumana ishishini lakho (umthengi okanye iB2B) ngokusekwe kwindawo okuyo,
I-Evocalize: ITekhnoloji yeNtsebenziswano yokuThengisa kubaThengisi beNdawo kunye neSizwe-ukuya-kweNdawo
NgoLwesibini, Meyi 17, 2022 NgoLwesibini, Meyi 17, 2022 Douglas Karr
Xa kuziwa kwintengiso yedijithali, abathengisi basekhaya baye basokola ngokwembali ukugcina. Kwanabo bavavanya imidiya yoluntu, ukukhangela, kunye nentengiso yedijithali bahlala besilela ukufikelela kwimpumelelo efanayo naleyo ifunyenwe ngabathengisi belizwe. Kungenxa yokuba abathengisi bendawo bahlala beswele izithako ezibalulekileyo - ezinje ngobuchule bokuthengisa, idatha, ixesha, okanye izixhobo - zokwandisa imbuyekezo entle kutyalo-mali lwabo lwentengiso yedijithali. Izixhobo zokuthengisa ezonwatyelwa ziibrendi ezinkulu azakhelwanga
NgoLwesihlanu, Meyi 6, 2022 NgoLwesihlanu, Meyi 6, 2022 Amra Beganovic
I-Artificial Intelligence (AI) ngokukhawuleza ibe yenye yezona zinto zidumileyo zentengiso. Kwaye ngesizathu esilungileyo-i-AI ingasinceda ukuba sizenze ngokuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindwayo, ukwenza umzamo wokuthengisa, kwaye senze izigqibo ezingcono, ngokukhawuleza! Xa kuziwa ekwandiseni ukubonakala kophawu, i-AI inokusetyenziselwa inani lemisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanya ukuthengisa okuphembelelayo, ukudala umxholo, ulawulo lwemidiya yoluntu, isizukulwana esikhokelayo, i-SEO, ukuhlelwa kwemifanekiso, kunye nokunye. Ngezantsi, siza kujonga ezinye zezona zibalaseleyo
I-CometChat: Isicatshulwa, iSibhalo seQela, iZwi, kunye ne-Video Chat API kunye nee-SDKs
NgoLwesithathu, Meyi 4, 2022 NgoLwesithathu, Meyi 4, 2022 Douglas Karr
Nokuba wakha usetyenziso lwewebhu, usetyenziso lwe-Android, okanye usetyenziso lwe-iOS, ukomeleza iqonga lakho ngokukwazi ukuba abathengi bakho bancokole neqela lakho langaphakathi yindlela engakholelekiyo yokuphucula amava kubathengi kunye nokwenza nzulu ukuzibandakanya nombutho wakho. I-CometChat yenza abaphuhlisi bakwazi ukwakha amava encoko athembekileyo nagcweleyo kuyo nayiphi na i-app yeselula okanye yewebhu. Iimpawu ziquka i-1-to-1 iNgxoxo yoMbhalo, iNgxoxo yoMxholo weQela, ukuChwetheza kunye neZalathi zokuFunda, ukuSayina okukodwa (i-SSO), iZwi kunye neVidiyo
Ihlumela leNtlalo: Yandisa ukuzibandakanya kwiMedia yeNtlalo ngoluPapasho, ukuMamela, kunye neQonga lokuThenga.
NgoMvulo, Aprili 25, 2022 NgoMvulo, Aprili 25, 2022 Douglas Karr
Ngaba ukhe walandela iqumrhu eliphambili kwi-intanethi kuphela ukuba uphoxeke ngumgangatho womxholo ababelana ngawo okanye ukungabikho kothethathethwano abanalo nabaphulaphuli babo? Luphawu oluxelayo, umzekelo, ukubona inkampani enamashumi amawaka abasebenzi kunye nezabelo nje ezimbalwa okanye ukuthanda kumxholo wabo. Bubungqina bokuba abamameli nje okanye banebhongo ngokwenene ngomxholo abawukhuthazayo. Izixhobo zemidiya yoluntu
Abaxhasi beendaba zeNtlalo